Ny fahasamihafana eo amin'ny gorodona plastika sy ny rindrina hazo matevina - ZD manam-pahaizana zoro
Home > Ny fahasamihafana eo amin'ny gorodona plastika sy ny rindrina hazo matevina
Ny toerana fanaovana fanatanjahantena dia misy ny kianja filalaovana basikety, fitsarana badminton, fitsarana volley, fitsarana tenisy latabatra, gym, sns, izay mifototra amin'ny kianja fanatanjahantena anatiny. Ny gorodona voapetraka amin'ireto toeram-panatanjahan-tena ireto dia ny gorodona fanatanjahantena vita amin'ny hazo sy ny gorodona fanatanjahantena PVC. Tao anatin'ny taona vitsivitsy izay, mihamaro ny toerana fanatanjahantena manomboka misafidy gorodona fanatanjahantena PVC, indrindra amin'ny toerana tsy fifaninanana tsy matihanina, kianja fanaovana fanatanjahantena, toerana fanatanjahan-tena ary toerana fanaovana fanatanjahan-tena mifidy gorodona fanatanjahantena PVC.
Ny gorodona fanatanjahantena PVC no safidy voalohany amin'ny toerana fanaovana fanatanjahantena satria mahazo tombony amin'ireo gorodona fanatanjahantena hazo matevina izy:
Fampitahana ny hafainganam-pandeha fanamboarana: fananganana ankapobeny fanatanjahan-tena. Raiso ho ohatra ho an'ny kianja filalaovana basikety amin'ny ankapobeny.
Ny fampitahana ny fampisehoana gorodona: ny gorodona vita amin'ny hazo matevina mora vaky, tsy azo tanterahina, kalalao, bobongolo, mamorona resonance, fanoherana ny fiantraikany, fanoherana ny fantsom-bidy, 90% ny haavon'ny rihana; Ny antibiotika, mora voadio sy tsy miaro, tsy misy fiovana, tsy misy korontana, tsy misy arko, tsy misy kalalao, matevina, habe maharitra, miakatra hatramin'ny 98%, azo antoka sy azo itokisana, afaka miaro am-pahombiazana ireo atleta tsy haratra.
Fampitahana ny loko: ny gorodona fanatanjahantena hazo matevina dia manana loko tokana, fa ny gorodona fanatanjahantena PVC dia misy loko maro, mety amin'ny loko miloko samihafa ary mora ny mifaninana, tsy voafetran'ny gorodona sy ny toerana.
Fampitahana ny fampisehoana fiarovana ny tontolo iainana: Noho ny fampiasana loko hakamoana amin'ny fanatanjahantena fanatanjahantena hazo, ny trano dia tsy tsara amin'ny tontolo iainana ary manana famoahana formaldehyde, raha toa ny 100 kilaometatra fanatanjahantena PVC 100% tsy misy formaldehyde sy famoahana entona manimba, tsy misy tontolo iainana sy tsy misy loto.
Ny tombony azo amin'ny fanatanjahantena PVC
Ny haavon'ny gorodona fanatanjahantena plastika matihanina dia azo ovaina rehefa misy fiantraikany, toy ny matotra misy tombo-kase miaraka amin'ny rivotra ao anatiny. Loza ara-panatanjahantena.
2. Ny olan'ny horohoro:
3. Ny olan'ny fihenan'ny vovoka:
Ny tsindrona napetraky ny olona mandritra ny fanazaran-tena dia miteraka fikovotrana ao amin'ny gorodona fanatanjahantena plastika .. Ny firafitry ny gorodona dia tsy maintsy manana ny fiasan'ny tsindrona manafintohina, izay midika fa ny gorodona dia tokony hanana fahaizana manapoaka angovo. Kely kokoa noho ny eo amin'ny tany sarotra ny hery miasa, toy ny amin'ny tany mivaingana. Izany hoe rehefa mitsambikina sy miankohoka amin'ny tany ny atleta, 53% amin'ny fiantraikany tokony ho tsindry amin'ny tany ny atleta, mba hiarovana ny kitrokelin'ny atleta, meniscus, tadidy ary atidoha, mba tsy haharatran'ny olona mandritra ny fanazaran-tena. ratra. Ny fiarovana azy dia mieritreritra ihany koa fa tsy misy fiantraikany amin'ny olona mifanila aminy ny olona iray rehefa mivezivezy eo amin'ny gorodona fanatanjahantena plastika. Io no foto-kevitra momba ny fihanaky ny fantsom-pifandraisana, ny fanamafisam-peo fanamafisana sy ny fanitarana lavabe voalaza ao amin'ny fenitra DIN Alemanina.
4, ny olan'ny fikaonan'ny friction:
Ny fandalinana dia naneho fa 12% ny ratra nahazo ny mpilalao basikety dia niseho nandritra ny fihodinana iray. Ny fahaizan'ny soratry ny fanatanjahan-tena dia manondro na manana lavaka be loatra ny gorodona (izay mampihena ny haingam-pandehan'ny fihodinana) na koa mivadika (izay mampitombo ny risika). Raha jerena ny hetsiky ny atleta sy ny fiarovana, ny kojakoja friction no tokony ho sarobidy indrindra eo anelanelan'ny 0.4-0.7. Ny fahaizan'ny friction amin'ny fanatanjahantena plastika plastika dia tazomina amin'ny ankapobeny eo anelanelan'ity kofehy ity.Ny coefficient de friction matihanina plastika plastika plastika matihanina dia 0.57. Ny tsy fitanisan-tsoa sy ny fanavaozana ny fanaovan-tsika mba hahazoana antoka ny hetsika mora sy ny fihodinan'ny toerana tsy misy sakana.
5. Ny olana momba ny faharetan'ny baolina:
Ny fitsapana fanentanana ny baolina dia ny fanintsanana ny basikety amin'ny haavon-tongotra 6,6 tongotra mankany amin'ny gorodona fanatanjahantena hizaha ny haavon'ny fitomboan'ny basikety. Ny angon-drakitra izany dia aseho isan-jato, ary ny haavon'ny fihodinan'ny basikety eo amin'ny tany mivaingana dia ampiasaina ho toy ny fenitra fampitahana mba hampisehoana ny maha samy hafa ny haavon'ny haavon'ny rebound. Ny fitsipiky ny lalao baolina anatiny dia mitaky ny fampiasana ny tany amin'ny fifaninanana fanatanjahantena na fampiofanana, toy ny fanaovana fanatanjahan-tena amin'ny baolina kitra sy ny bola hafa, ary ny famerenam-bola ny bola. Ny gorodona fanatanjahantena plastika matihanina maro dia manana fahatapahan-java-mahasoa sy maharitra.Tsy misy matimaty maty amin'ny gorodona, ny fahaizan'ny fampitahana miverimberina hatrany amin'ny 98%.
6, ny resaka fiverenan'ny angovo ara-panatanjahantena:
Io dia manondro ny angovo ara-panatanjahantena averina amin'ny herin'ny fanatanjahantena plastika rehefa manao fanatanjahan-tena ireo atleta mba hanatsarana ny fahombiazan'ny fanatanjahan-tena.
7, ny olana momba ny fanakodiavana:
Ny enta-mavesatra sy ny fiorenan'ny gorodona fanatanjahantena matihanina dia tsy maintsy mahafeno ny fepetra takian'ny fifaninanana sy ny fiofanana.Raha ohatra, rehefa mihetsika ny fonosana basikety mihetsika sy ny fanatanjahantena mifandraika dia tsy mety simba ny tany sy ny rafitry ny gorodona. Ny famaritana ny fenitra sy foto-kevitra mikotrika.
Ny fahasamihafana eo amin'ny gorodona plastika sy ny rindrina hazo matevina Ny atiny mifandraika